Inqubomgomo Yemfihlo - 802Quits
Ama-Vermonters Inqubomgomo yobumfihlo
Siyabonga ngokuvakashela i-802Quits.org nokubuyekeza inqubomgomo yethu yobumfihlo. Imininingwane esiyitholayo incike kokwenzayo lapho uvakashela indawo yethu. Ingqikithi yenqubomgomo yethu yobumfihlo ilula futhi icacile: ngeke siqoqe imininingwane yakho ephathelene nawe lapho uvakashela iwebhusayithi yethu ngaphandle kokuthi ukhetha ngokuzithandela ukusinikeza leyo mininingwane, ngokwesibonelo, ngokufaka imininingwane kwifomu lokuzithandela le-inthanethi noma ngokusithumela imeyili.
Nakhu ukuthi siluphatha kanjani ulwazi mayelana nokuvakashela kwakho iwebhusayithi yethu:
Uma ungenzi lutho ngesikhathi sokuvakasha kwakho kodwa ubhekabheka kuwebhusayithi, ufunde amakhasi, noma ulanda imininingwane, sizoqoqa futhi sigcine imininingwane ethile ngokuvakasha kwakho ngokuzenzakalela. Isofthiwe yakho yesiphequluli sewebhu idlulisela lolu lwazi kithi. Lolu lwazi alukukhombisi wena uqobo.
Siqoqa ngokuzenzakalela sigcine kuphela imininingwane elandelayo mayelana nokuvakasha kwakho:
Ikheli le-IP lezinombolo (ikheli le-IP liyinombolo enikezwa ngokuzenzakalela kwikhompyutha yakho noma nini lapho uvule iWebhu) lapho ufinyelela khona iwebhusayithi ye-802Quits.org Isoftware yethu ingahle ibalaze lawa makheli e-IP kumagama wesizinda se-Inthanethi, isibonelo, “xcompany.com” uma usebenzisa i-akhawunti yangasese yokufinyelela i-Inthanethi, noma i- “yourschool.edu” uma uxhuma esizindeni senyuvesi.
Uhlobo lwesiphequluli nohlelo olusetshenziswayo ukufinyelela iwebhusayithi engama-802Quits.org.
Usuku nesikhathi ofinyelela ku-802Quits.org.
Amakhasi owavakashelayo, afaka phakathi ihluzo ezilayishwe ekhasini ngalinye namanye amadokhumenti owalanda, njengamafayela e-PDF (Portable Document Format) nemibhalo yokucubungula amagama.
Uma uxhume ku-802Quits.org kusuka kwenye iwebhusayithi, ikheli laleyo webhusayithi. Isoftware yakho yeWebhu idlulisa lolu lwazi kithi.
Sisebenzisa lolu lwazi ukusisiza senze isiza sethu sisebenziseke kakhulu kubavakashi - ukuze sifunde ngenani labavakashi besiza sethu nezinhlobo zobuchwepheshe ezivakashelwa izivakashi zethu. Asilandeleli noma siqopha imininingwane ngabantu ngabanye kanye nokuvakashelwa kwabo.
Ikhukhi yifayela lombhalo elincane elingabekwa yiWebhu kwi-hard drive yekhompyutha yakho, ngokwesibonelo, ukuqoqa imininingwane ngemisebenzi yakho esizeni noma ukwenza ukuthi ukwazi ukusebenzisa inqola yokuthenga online ukulandela umkhondo izinto ofisa ukuzithenga. Ikhukhi lidlulisa lolu lwazi lubuyele kwikhompyutha yewebhusayithi, ngokuvamile, okuwukuphela kwekhompyutha engakufunda. Abathengi abaningi abazi ukuthi amakhukhi abekwa kumakhompyutha abo lapho bevakashela amawebhusayithi. Uma ufuna ukwazi ukuthi lokhu kwenzeka nini, noma ukukuvimbela ukuthi kungenzeki, ungasetha isiphequluli sakho ukuthi sikuxwayise lapho iwebhusayithi izama ukufaka ikhukhi kukhompyutha yakho.
Asikukhuthazi ukusetshenziswa kwamakhukhi ewebhu kuma-Portal ethu. Amakhukhi wesikhashana, noma kunjalo, angasetshenziswa lapho kunesidingo ukuqedela ukuthengiselana noma ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi lokusebenzisa isayithi.
Imeyili namafomu aku-inthanethi
Uma ukhetha ukuzikhomba ngokuthumela i-imeyili noma ngokusebenzisa amafomu ethu aku-inthanethi - njengalapho ucela amathuluzi wokuyeka mahhala; thumela i-imeyili kumlawuli wesayithi noma komunye umuntu; noma ngokugcwalisa enye ifomu ngemininingwane yakho bese uyithumela kithi ngewebhusayithi yethu - sisebenzisa lolo lwazi ukuphendula umyalezo wakho nokusisiza sikuthathele imininingwane oyicelile. Siphatha ama-imeyili ngendlela efanayo nesiphatha ngayo izincwadi ezithunyelwe ku-802Quits.org.
I-802Quits.org ayiqoqi imininingwane yokukhangisa kwezentengiso. Ngeke sithengise noma siqashe imininingwane yakho ekhomba umuntu kunoma ngubani.
Ngaphezu kwe-imeyili, i-802Quits.org ingacela imininingwane yakho yangasese ukuze icubungule izicelo nama-oda atholakala ku-802Quits.org. Izibonelo zifaka:
Isicelo samathuluzi wokuyeka mahhala.
Yonke le misebenzi ingeyokuzithandela. Uzohlala unenketho yokuthi uyasenza yini isicelo futhi unikeze lolu lwazi.
Iwebhusayithi ye-802Quits.org iqukethe izixhumanisi kwamanye ama-ejensi wombuso nezinye izinsiza zomphakathi noma zikahulumeni. Ezimweni ezimbalwa, sixhuma izinhlangano ezizimele ngemvume yazo. Uma usuxhumanise nenye isayithi, ungaphansi kwenqubomgomo yobumfihlo yesayithi elisha.
Sikuthatha ngokungathi sína kakhulu ukwethembeka kolwazi nezinhlelo esizigcinayo. Kanjalo, sesisungule izindlela zokuphepha zazo zonke izinhlelo zolwazi ezingaphansi kolawulo lwethu ukuze ulwazi lungalahleki, lusetshenziswe kabi noma lushintshwe.
Ngezinhloso zokuphepha kwesiza nokuqinisekisa ukuthi izinsiza zethu ze-Intanethi zihlala zitholakala kubo bonke abasebenzisi, sisebenzisa izinhlelo zesoftware ukuqapha ithrafikhi ukukhomba imizamo engagunyaziwe yokufaka noma yokushintsha imininingwane noma yokulimaza ngenye indlela. Uma kwenzeka kuphenywa ngokugunyazwa komthetho futhi kulandelwa noma iyiphi inqubo yezomthetho edingekayo, imininingwane evela kule mithombo ingasetshenziswa ukusiza ukuthola umuntu.
Ukuphepha kwekhasi lezingane nobumfihlo
I-802Quits.org ayiqondisiwe ezinganeni ezineminyaka engaphansi kwengu-18, futhi ayiqoqi ulwazi lomuntu siqu ezinganeni. Ngeminye imininingwane mayelana nobumfihlo bezingane ngokuvamile, sicela ubheke iFederal Trade Commission's Umthetho Wezingane Wokuvikela Ubumfihlo ku-Inthanethi Iwebhusayithi.
Siyethemba ukuthi abazali nothisha bayabandakanyeka ekuhloleni kwe-inthanethi kwezingane. Kubaluleke kakhulu ukuthi abazali baqondise izingane zabo lapho izingane zicelwa ukuthi zinikeze imininingwane yazo ku-inthanethi.
I-802Quits.org ayihlinzeki noma ithengise imikhiqizo noma izinsizakalo zokuthengwa yizingane. Okubaluleke kakhulu, uma kwenzeka izingane zihlinzeka ngolwazi nge-802Quits.org iwebhusayithi, isetshenziselwa kuphela ukusenza sikwazi ukuphendula umbhali, hhayi ukudala amaphrofayli ezingane
Singabuyekeza le nqubomgomo ngezikhathi ezithile. Uma senza noma yiziphi izinguquko ezinkulu sizokwazisa ngokuthumela isimemezelo esivelele emakhasini ethu. Lesi isitatimende senqubomgomo futhi akufanele sichazwe njengesivumelwano sanoma yiluphi uhlobo.
Imininingwane engaphezulu Ngokusefa Okuphephile
I-Federal Trade Commission inikeza ulwazi olubalulekile mayelana nokuntweza okuphephile.
UMnyango Wezempilo eVermont
IBurlington, VT 05401